Ipaki Ostrovsky, Rostov-on-Don: ikheli kanye izithombe
befuna Urban, umsindo wezimoto, phakathi nezinsuku zokusebenza - konke zixutshwe eyodwa, futhi ngezinye izikhathi ufuna uphumule. Kuyinto nokuthula kwengqondo futhi ngesikhathi esifanayo yokuchitha isizungu elithakazelisayo ayatholakala kwepaki Ostrovsky. Kabanzi ngakho utshelwa kamuva kulesi sihloko.
Wazalelwa kule ekhoneni green ngasekupheleni kwekhulu le-19. Ogama lakhe behlonipha kwepaki kwaba intatheli ezidumile isikhathi Nikolaya Ostrovskogo. Ngokushesha Groves itshalwe endaweni enkulu, futhi isikwele phathelana kancane kancane zishintshe. Ipaki Ostrovsky (Rostov-on-Don), ogama kheli: Ave Selmash 1a, waqala impilo yakhe asebenzayo.
Isikhathi esining impela igama kwepaki lashintsha, futhi wahlala Adalberto isikhathi eside. Futhi ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-50, isikwele wanikezwa ngegama lalo lamanje - Ipaki of Culture and Qinisekani okuthiwa Nikolaya Ostrovskogo.
Isici esiyinhloko kuba eziningi izimila esiyingqayizivele. izinhlobo eziningi zezitshalo ezingavamile nezihlahla. Sekuyisikhathi eside Ezinye zazo kwaba iminyaka engaphezu kweyikhulu.
Akunjalo ngempela ukuya isikhungo imfanelo ukubheka abaqeqeshi kanye nokunye okufana nalokho. Ipaki Ostrovsky (Rostov-on-Don) - uhlobo yezemidlalo isizwe esincane, lapho kukhona indlela yokuphila enempilo. Kungenzeka kudingeke bahambe ubude impilo endleleni cishe 1 ikhilomitha. Futhi ngokuvumelana, bashaywe umoya opholile.
Futhi epaki imahhala, wena bangazijayeza begodu bahlanganyele athletics, kuyilapho kokuthola umfutho wamandla kanye ajabule.
Eminyakeni emibili edlule, epaki selikhule alley signalers. Ngo bendabuko Arbor Day ke Wawusemhlabathini oki 70. Kusukela ngaleso sikhathi, futhi Alley wazalwa. Kuyinto ebaleni lokudlala ukuze Amazing emgwaqweni.
Ngaphakathi kukhona epaki ezimbili
Square kuyabamangaza zonke izimenywa nge ukwehlukana kwayo. On insimu yalo kukhona Luhambo eyinqaba ezimbili: intambo epaki futhi square izibankwakazi. Okuvelayo alibaleke imizwelo eyakhayo aqinisekisiwe.
Thola injabulo eningi uhambo ku 6 imigwaqo amazinga ehlukene nobunzima kungaba izindophi Yiqiniso. Ukuze ubuyele emuva ngesikhathi futhi ukuhlangabezana izakhamuzi kwesikhathi Mesozoic, ngokwanele ukubheka ekuvakasheni "Merry Dino."
Ipaki Ostrovsky (Rostov-on-Don) - kwendawo lapho ungabona abameleli zezwe lasendulo. Indawo enkulu ingaphezu 20 ubuxhakaxhaka obuzisebenzela izibalo ukuthi ukuhambisa, kuyilapho likhipha umsindo ezahlukene. Eceleni umbukiso ngalinye has a ulwazi ibhodi ekhethekile ku okulotshiwe igama isilwane, imingcele yayo kanye ndawo.
Ukuze kube mnandi futhi uyafundisa uphumule ngokwanele ukuba uvakashele ipaki Ostrovsky (Rostov-on-Don). Dinosaurs zifana kakhulu kuze kube manje, ngenxa yokuthi ukuthi into nokunwebeka iye asetshenziswe ekukhiqizeni.
Dinolend - uhlobo ikhadi lebhizinisi Rostov kwezivakashi. Lo mbono yazalwa eminyakeni 13 edlule, kodwa akukakasetshenziswa.
imizwa Ezinhle ukuthi uyohlala phakade kwimemori, nika Paintball kanye laser ithegi. Ukuvakashela leli Luhambo, izivakashi akudingeki wokulungiselela ezikhethekile ezingokomzimba futhi ulwazi imithetho. Ukuze wenze lokhu, kudingeka isifiso kuphela kuyajabulisa enkulu nesikhathi sokuzijabulisa nabangane, umndeni noma osebenza nabo ngokuvakashela kwepaki yaqanjwa Ostrovsky (Rostov-on-Don).
Ukuze umuntu athole umbono ongokoqobo indiza okusheshayo, siyakwamukela kulo ukuthatheka "lingabuyela". On the imizuzwana yokuqala ogibele simenywa real air isiphepho, okuzoba nice kuphole futhi ukukhulisa izinwele ekugcineni. Kuleli Ukugibela imikhawulo yobudala.
Fans of ngesivinini adventure kanye esktremaly ungakwazi ashona imizwelo yakho ongenakulibaleka ku motodrom futhi Awe-Carting wesifunda. Kube elinde ATVs enamandla futhi injabulo.
On the "Rainbow" izivakashi asemasha nabazali bawo ungavakashela ephahlwe enhle ukuthi kuhlobisa Ostrovsky kwepaki (Rostov), isithombe zazo okusesihlokweni esithi.
Kulabo akuzona sebesaba into ephakeme nje futhi bafuna ukujabulela konke ubuhle epaki kusukela phezulu, kukhona sipho ezithakazelisayo - vakashela isondo Ferris. Ukukhululwa kwe-adrenaline futhi eziningi imizwelo eyakhayo ezingeni ukuphakama kwamamitha kuka 25 okuqinisekisiwe.
Thuthukisa kwegazi kanye muscle ithoni yi kungaba ukuthatheka "Ibhayisikili sokuqasha" ngokuvakashela Ostrovsky Park (Rostov-on-Don). Awukwazi nje ukugibela ngesithuthuthu, kodwa futhi ku-roller skates, Scooters, skateboard futhi bibikarah.
Ukuze uphumule nje kuphela kodwa futhi ukuba sidle, izivakashi wavakashela cafe epaki Ostrovsky. Rostov-on-Don izivakashi nge izikwele zawo oluhlaza.
Izivakashi ezithanda yokuchitha isizungu kwamasiko, ungakwazi ukuhlola umsebenzi inhlangano yentsha. Kuyo, abahlanganyeli ihlelwe ukusebenza ezigcawugcawu ahlukahlukene, bawenza zezingane kanye namaholide umndeni. Cultural ezokungcebeleka Isizukulwane esidala senzeka ngesimo emihlanganweni thematic.
Minyaka yonke kwepaki elibamba izenzakalo mayelana 300. Phakathi ngamaholidi nangezimpelasonto izivakashi ukusebenza olumnandi waseshashalazini, imincintiswano kumnandi, amakhonsathi, ukuzijabulisa kanye nezinhlelo amageyimu.
Ipaki izivakashi njalo akuveli ngaphandle namantongomane. Kwakuthinta lapha uthole squirrel abanonya, golubokrylaya jay, njengoba imihlambi ka fly amajuba kanye nabanye abameleli jikelele silwane.
Izivakashi uyajabula ukuthi kwepaki akuyona kuphela enhle, kodwa futhi uzilungise ngesikhathi esifanayo. Abanye-ke ngisho livele lifane nehlathi, njengoba ngempela kunjalo has a lot of yezimila nezilwane ezihlukahlukene.
Indlela athi izivakashi ujabule, ngamasiko hhayi kuphela, kodwa futhi kungaba mnandi ukuchitha ngempelasonto, iza Ostrovsky Park (Rostov-on-Don), okuyinto ugibele ukunikeza imizwa ongenakulibaleka.
Izivakashi kule ndawo like yokuthi kukhona zokuhamba eziningi. Futhi, kukhona njalo ukuzijabulisa izivakashi abancane, kanye abadala. Ezinganeni kukhona trampolines eziningi, izimoto, carousels.
Nokho, naphezu kweqiniso lokuthi siqiwu ezivikelwe, izivakashi belulekwa ukuba kube khona ebusuku, njengoba babezohlala aphanga nokubanjwa inkuzi. Ngenxa yalokhu, idumela kulesi siqiwu akukuhle kakhulu, futhi asingabazi kakhulu ukweluleka izivakashi yokwenza ngcono ezokuphepha.
Ikakhulukazi abavakashile ukuba bazibonele amakhonsathi nemicimbi ekhethekile ukuthi aphethwe lapha.
Rest e Phuket ngo-August: Izici, amabhishi, isimo sezulu, kanye nokubuyekeza
I-Metro Kotelniki: Ukuvulwa okulinde isikhathi eside kuhlelwe ekupheleni kuka-2013
Omkhulu Koko Shanel. Biography iNdlovukazi of Paris imfashini
HDPE tube: izici futhi izicelo
Indlela yokwenza ibhokisi ibhokisi ngesivalo: isigaba master ngezinyathelo
Pass Shahumyan - indlela emfushane eya kolwandle